भारतबाट समूहमा आएका थिए सुर्खेतका ३ जना कोराना संक्रमित – Khabar Silo
भारतबाट समूहमा आएका थिए सुर्खेतका ३ जना कोराना संक्रमित
१० जेठ, काठमाडौं । सुर्खेतमा पहिचान भएका ३ जना कोरोना संक्रमित भारतको दिल्ली र मुम्बईबाट बाँके हुँदै आएको खुलेको छ ।
यही जेठ ८ गते नेपाल आएका उनीहरुमा जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा नाकामै जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिए ।
बाँके हुँदै आएका उनीहरुको समूहको कर्णाली प्रवेशद्वार बबईमा र्‍यापिड डाइगोनोस्टिक (आरडीटी) जाँच गरिएको थियो । तीमध्ये १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनीहरुलाई वीरेन्द्रनगरको क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर जाँच गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालको ल्याबमा पीसीआर जाँच गरिएकामध्ये एक महिलासहित ३ जनामा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो । उनीहरुको स्वाब पुनः बाँकेको भेरी अस्पतालको ल्याबमा जाँच गर्दा पनि पोजेटिभ आएपछि शनिबार घोषणा गरिएको हो ।
कोरोना नभएकालाई मात्रै नाकाबाट प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न कर्णाली सरकारको माग
संक्रमित तीनै जना पश्चिम सुर्खेतका हुन् । २ जना बराहताल गाउँपालिका र एकजना चौकुने गाउँपालिकाका हुन् ।
संक्रमित तीनै जनालाई वीरेन्द्रनगरको कालागाउँस्थित प्रदेश अस्पतालमा राखिएको महाशाखा प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । उनीहरु सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
उनीहरु समूहमा आएको भए पनि सम्पर्कमा कोको थिए भन्ने पत्ता लागिसकेको छैन । चिकित्सकको टोलीले कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिरहेको महाशाखा प्रमुख तिवारीले बताए ।
सुर्खेतका ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या ४ पुगेको छ । यसअघि जेठ ५ गते दैलेखका युवकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनी पनि भारतबाटै आएका हुन् ।
पछिल्लो समय भारतबाट दैनिक हजार बढी संख्यामा कर्णालीवासी भित्रिरहेका छन् । उनीहरुलाई नाका प्रवेश गर्नुअघि मुख्य नाका बबईमा आरडीटी जाँच गर्ने गरिएको छ ।
आधा घण्टामा आउँछु भनेर ब्वाइफ्रेण्डसँग गएकी २१ वर्षीय बिना आखिर कहाँ बेपत्ता भईन ? ‘गौरीगञ्जमा लगेर छोरीलाई कु टे को भन्ने सुनेको हो, कहाँ छ के छ केही थाहा छैन’
चितवन, २२ असार । गैँडाकोट नगरपालिका – ४ जनक कलेज पछाडि झपर्दी चोककी २१ वर्षीय बिना सापकोटा विगत ८ दिनदेखि बेपत्ता छिन् । असार १४ गते अपरान्ह साढे ४ बजे घरबाट निस्किएकी बिना अहिलेसम्म घर नफर्किएको उनका बुबा जयश्वर सापकोटाले जानकारी दिए । जयश्वरका अनुसार सो दिन प्रवेश कँडेलले बिनालाई गैंडाकोटस्थित घरैबाट स्कुटरमा राखेर लगेका […]
Posted on September 24, 2021 Author khabar silo
असोज । बैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल जान आवेदन दिएकामध्ये करिब २८ सय जनाको कागजात नक्कली पेश गरेको खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनबाट परेको आवेदन प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा २,७९० आवेदन फारम अस्वीकृत गरेको थियो । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार ९ हजार […]
अब यसरी पाउनुहोस् खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै
Posted on July 10, 2021 Author khabar silo
सरकारले लकडाउन अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा २० प्रतिशत छुट दिन थालेको छ। अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषण मार्फत सो व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। सरकारको घोषणा सँगै कार्यान्वनयमा आएको छ। बिहीबार सरकारी निकायका दुई व्यापारिक संस्थानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। […]
एकै गाउँपालिकामा ११२ संक्रमित : स्थानीय सरकार थाक्यो, केन्द्रले हेरेन
फेरि थपिए ७ जना कोरोना सक्रमित, एकैदिन ७५ जनामा संक्रमण